Toeran’ny Lehiben’ny Mpanohitra : NOLAVIN’NY HCC NY FANGATAHAN-DRY HAJO ANDRIANAINARIVELO -
AccueilRaharaham-pirenenaToeran’ny Lehiben’ny Mpanohitra : NOLAVIN’NY HCC NY FANGATAHAN-DRY HAJO ANDRIANAINARIVELO
Tsy mahafeno ny fepetra takian’ny lalàna mifehy ny satan’ny antoko mpanohitra ( lalàna n° 20111-013 tamin’ny 9 septambra 2011) ny taratasy filatsahan-kotendrena an’i Hajo Andrianainarivelo ho eo amin’ny toeran’ny mpanohitra. Nolavin’ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana ny fangatahana izay napetrany ho lehiben’ny antoko mpanohitra. Ny fehin-kevitra n°01-Hcc/Av nioaka omaly 12 Janoary 2017 no mirakitra an’izany.
Tapa-tenda araka izany ingahy Hajo Andrianainarivelo araka ity fehin-kevitry ny Hcc ity. Nitombo indray ny fahadisoam-panantenana ho an’ny lehiben’ny antoko Mmm. Tsy takona afenina mantsy ny fialan’ireo depiote teo aminy noho ny tsy fitovian-kevitra. Isaka ny manao valan-dresaka amin’ny mpanao gazety ry Mara Niarisy dia mamerina hatrany fa tsy depiote ao amin’ny Mmm intsony. Efa nanambara ny tsy fiarahany amin’i Hajo ihany koa ry Milavonjy Philobert depiote Mmm taloha….Ny herinandro teo no nanao fanambarana lehibe momba ny fanoherana i Hajo Andrianainarivelo ary toa ny tsindrim-paingotra nataony ho an’ny Hcc mba hankatoa ny fangatahany no nisy tamin’izany. Na tsy mivantana aza, dia toa nanindry ankolaka ny Hcc ny kabariny.
Tsy raharahan’antoko tokana ny fakana ny toeran’ny lehiben’ny mpanohitra, hoy ny Hcc, fa anjaran’ny vondrona parlemantera eo anivon’ny Antenimieram-pirenena. “ Tsy mahefa hanendry filohana mpanohitra ny antoko politika Malagasy Miara-Miainga”, araka ny andininy faha-26 ao anatin’ilay fehin-kevitry ny Hcc nivoaka omaly ity. Midika izany fa tamin’ny alalan’ny antoko politikany no nangatahan’i Hajo an’io toerana io fa tsy tamin’ny anaran’ny vondrona parlemantera. Votsitra araka izany ny tombontsoa be nokendren’i Hajo Andrianainarivelo. Araka ny voarakitra ao anatin’ny satan’ny mpanohitra mantsy dia mahazo toerana iray ao anatin’ny Antenimieram-pirenena mihitsy ilay filohan’ny mpanohitra. Mahazo karama ary misitraka tombontsoa maro.